Wasiir Khadiijo Diiriye oo la noqotay lacag ay u diri lahayd Barkhad Batuun, una wareejisay Dadkii.. - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Wasiir Khadiijo Diiriye oo la noqotay lacag ay u diri lahayd Barkhad Batuun, una wareejisay Dadkii..
Wasiirka Gargaarka Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa shaacisay inay la noqotay taageero dhaqaale oo ay u ururisay Xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun oo ka tirsan Golaha Wakiilada Somaliland.
Wasiirad Khadiija ayaa si toos ah muuqaal ay u duubtay ku faahfaahisay sida ay uga xumaatay hadalladii kasoo yeeray Barkhad Batuun ee ku saabsanaa dadkii ay Somaliland ka barakicisay magaalada Laas-caanood ee Gobolka Sool, taasoo ay sheegtay inuusan ku qasbaneyn.
Khadiijo Diiriye oo si weyn ugu dabaaldegtay guushii Barkhad Batuun ee Doorashadii Somaliland kusoo baxay ayaa sheegtay in hadda ay ururisay lacag gaareysa $15,000 doollar oo ay dooneysay inay gaarsiiso 20-kun Dollar, una dirto Barkhad Battuun si uu Gaari ku iibsado, kadib markii uu Xildhibaanka Gaarigiisii u iibiyey dad ka mida taageerayaashiisa.
“Ma awoodo in ra’iisal wasaaraha aan wasiirkiisa ahay, mushaarka aan ka qaato ee dhan $300 aan kuu soo diro.. Saaxiibada kale waxaan u celinayaa lacagtooda.. Waxaan ula daahay lacagta waxay ahayd inaan 20-kun Dollar gaarsiiyo.. Dadka lacagta aan kasoo qaaday waxaa ku jira lix qof oo saaxiibo ah, oo qaarkood ay is xigaan dadka lasoo barakiciyey..” ayey tiri wasiir Khadiija.
3000 Dollar oo ay ku dartay lacagtaasi ayey sheegtay inay haddda siineyso Guddiga Gurmadka ee maamulka Koonfur Galbeed u sameeyay taakulada dadka laga soo barakciyey Gobolka Sool.
Previous articleGuddoomiyaha Kaaraan oo dalbaday in Degmadiisa laga saaro Ciidamada Guutada 4-aad ee Col. Saney
Next articleCiidamada Haramcad iyo Gorgor oo u ruuqaansaday dhinaca Guriceel iyo fariisin cusub oo ay sameysteen..